LC Technology unikeza izinsizakalo yokutakula idatha zonke izinhlobo Digital Media, kuhlanganise hard drive alulame idatha. Njengomunye woFakazi e-United States’ yezinkampani ezinkulu amasevisi flash inkumbulo alulame idatha, LC Ubuchwepheshe inikeza isevisi ekhethekile wonke umuntu kusuka imfundamakhwela kuya professional. Tampa Zethu, amasevisi Florida yokutakula idatha ungalulama iyiphi futhi zonke izinhlobo idatha. Uke ngephutha ususiwe amafayela idatha, izithombe, amavidyo noma amafayela alalelwayo kusuka imidiya yakho, ihlelwe noma wakhipha abezindaba ngesikhathi inqubo bhala? Izinsiza zethu yokutakula idatha ungalulama amafayela akho futhi uthole idatha yakho emuva.
Tampa Zethu, Florida yokutakula idatha labs kukhona ezindaweni bephephile yonke idatha ikhasimende igcinwa iyimfihlo. Elawulwa ukufinyelela laboratory kusho kuphela Ochwepheshe ezifanele ukuphatha ulwazi olubucayi. Sihlale izinkontileka ukuze alulame idatha bahlukanisa ngoba uhulumeni, abomthetho nezinhlangano ezizimele. LC Technology ojwayele ezingeni ubumfihlo nesivikelo oluthathwa izinto ezidinga. Wonke amadokhumenti walulama esula unaphakade ngemuva 30 izinsuku.